Xukuumadda Somaliland Oo Go’aamo Ka Soo Saartay Colaaddii Ka Dhacday Deegaanka Ceel-afweyn | Somalilandpost
Xukuumadda Somaliland Oo Go’aamo Ka Soo Saartay Colaaddii Ka Dhacday Deegaanka Ceel-afweyn
September 22, 2016 | Published by: Nuur
Ceel-Af-weyn (SL.Post) Xukuumadda Somaliland, ayaa go’aamo ka soo saartay Colaaddii Bishii hore Deegaannada Hoos taga Degmada Ceel-Af-weyn ee Gobolka Sanaag ku dhex martay Beelaha Walaalaha ah, taasi oo Dad ku dhinteen, kuwo kalena ku dhaawacmeen.
Go’aamadan Xukuumaddu soo saartay oo lagaga hor-tagayo in mar kale Dadka halkaa wada degaa isku dilaan Baadka iyo Biyaha ka dhexeeya, ayaa waxay Xukuumaddu Go’aamisay in Dhul-daaqsimeedka iyo Ceelasha Biyaha ee ku yaalla deegaannada Colaaddu ka dhacday aan la kala sheegan karin oo la wada leeyahay.
Go’aammadan oo ay saxeexeen Wasiirrada Xukuumadda u qaabilsan arrintaasi isla-markaana Madaxtooyadu soo gaadhsiisay Saxaafadda, ayaa u qornaa:-
GO,AANKA DAWLADDA JSL
GO’AANKA DAWLADDA JSL KA SOO SAARTAY DHUL-DAAQSIMEEDKA, DEEGAANKA IYO BIYAHA DUUD CARAALE IYO GUUD AHAANBA DHULKA BULSHADU WADA DEGTO EE DEEGAANADA CEELAFWAYN
Ka dib shaqaaqadii ka dhacday deegaanka kor ku sheegan oo keenay dhimasho iyo dhaawac ay sabab u tahay khilaafka dhulka, daaqa iyo deegaamayntu, ayaa dawladda JSL ka soo saartay go’aamada hoos ku xusan si ay deegaankaas uga hirgasho nabad waarta, wada noolaansho iyo baad iyo biyo wadaag loo siman yahay.
In la sugo lana helo nabad waarta oo dhexmarta beelaha walaalaha ah ee wada dega deegaamada Ceel Afwayn, taas oo ku salaysan is aamin iyo wadaagga baadka iyo Biyaha
GO’AAMADA XUKUUMADDU WAA SIDAN HOOS KU CAD;
B- Dawladda ayaa ka masuul ah guud ahaan nabadgalyada iyo amaanka shacabka JSL, gaar ahaan deegaamada go,aankani sida tooska ah u saamaynayo.
J- Gebi ahaanba waxa reeban haysashada hubka culus ee uu ugu yar yahay qoriga BKM. Ciddii lagu arko hubka noocaas ah, waxa loo aqoonsanayaa dambiile khalkhal gelinaya nabadgelyada waxana ciidanka nabadeglyadu ka qaadayaan talaabada ku haboon.
KH- Waxa la farayaa waxgaradka, odayaasha iyo hoggaamiyayaasha dhaqanka ee beelaha (Cuqaasha) in ay kala diraan ciidan beeleedyada hubaysan 24 saacadood gudahood oo ka bilaabanta maaanta oo taariikhdu tahay 21/09/2016 (Shalay).
D- Shakhsiyaadka ama kooxda ka hortimaadda kala dirista ciidan beeleedyadaas, fulin wayda qodobada go,aanka iyo awaamiirta ciidanka qaranka waxa loo aqoonsanayaa dambiile/dambiilayaal waxaana laga qaadayaa talaabo kasta oo ku haboon iyadoo la horgayn doono hay’adaha sharciga.
B- Iyadoo la tixraacayo degreetada madaxwaynaha JSL, dhulka daaqa iyo deegaanka xoolaha lagu dhaqaa waa hanti qaran oo ay masuul ka tahay dawladdu, sidaas awgeed lama kala laha, lamana kala sheegan karo, dhulka manaafacaadkiisana waa loo siman yahay
T- Ciddii ay ku cadaato inay cid kale ka sheegato dhul daaqsimeedka, waxa ciidanka iyo hay’adaha amnigu u xilsaaran yihiin inay talaabo sharci oo ku haboon ka qaadaan.
J- Laga bilaabo maanta oo taariikhdu tahay 21/09/16 (Shalay) waxa reeban in deegaamada dhul daaqsimeedka laga yagleelo magaalooyin, xidhmooyin, tuulooyin, ceshiimooyin, Baraago, IWM.
X- Maamullada gobolka Sanaag, Sool iyo maamulada degmooyinka Ceel-Afwayn, Garadag, Dararwayne, Awr Boogays iyo Xudun awood sharci uma laha ogalaashaha iyo bixinta degsiimooyin cusub oo laga yagleelayo dhul daaqsimeedka ilaa iyo inta sharci qeexayaa ka soo baxayo.
Dawladdu iyadoo ka duulaysa:
Ilaalilnta iyo daryeelka dhul-daaqsimeedka dadka ka dhaxeeya
Dawladda JSL waxay go’amisay ;
T- In ugu danbayn 10 bisha Tobnaad (10/10/2016) gebi ahaanba la baabiyo, lana aaso dhamaan waxii dhisme ka jira deegaanka bacaha sida; godadka bacaha la geliyo ee biyaha, waabab, Buulal, xidhmooyin, IWM
Dawladda JSL waxay go,aamisay ;
T- Waxa Reeban in dhismayaal iyo degsiimo laga sameeyo Ceelasha Duud Caraale go’aankan ka dib.
T- Ceelka Dogoble waxa masuul ka ah wasaaradda biyaha oo keenaysa mishiino iyo shaqaale dhex u ah bulshada deegaankaas. Inta la keenayo mishiinka wasaaradda waxa lagu cabayaa habka wadaanta ama mishiin ay ciidanka qaranku maamulaan. Waxaana ka reeban in lagu isticmaalo mishiin gaar loo leeyahay.
J-Wasaaradda biyuhu waxay ka dhisaysaa ceelasha dushooda taangi biyood sida ugu dhakhso badan.
X- Maaddaama Ceelka Dogoble iyo ceelasha kale ee Duud Caraalle ku filan yihiin waraabka xoolaha, waxa la mamnuucay dib u qodista ceelka Dhuxulaalay gebi ahaantiis.
Kh- Hadiiba ay timaaddo baahi loo qabo qodista ceelka Dhuxulaalay oo ay bulshada deegaanku isku raacsan tahay waxa awooda bixinta iska leh dawladda dhexe ee JSL oo kaliya.
T- Qadarka iyo qiimaha magta dadka dhintay waxa lagu kala qaadanayaa qofkii 130 Halaad (Boqol iyo sodon Halaad)
J- Jifada magahaas waxa lagu kala qaadanayaa 40 Halaad oodhogor ah waxaana lagu bixinayaa muddo dhan 30 cisho oo ka bilaabanta berri oo taariikhdu tahay 22/09/2016 (Maanta)
X- Magwaynta kale waxa lagu kala qaadanayaa qiime dhan $400 ( Afar boqol oo dollar Hashii), waxaana lagu bixinayaa muddo dhan 90 cisho kalliya oo ka bilaabanta berri oo taariikhdu tahay 22/09/2016 (Maanta).
KH- Waxii dhaawac dhexyaala beelaha walaalaha ah waxa lagu xalinayaa oo loo marayaa habka shareecada Islaamka, waxaana loo saarayaa Guddi culimo ah oo khibrad u leh muddo 90 Cisho gudahood ah.
Kh- Magahaas haddii mudadaas kor ku sheegan lagu bixin waayo, Xukuumadda awood u isticmaalaysa si ay ugu bargoyso.
B- Haddii la jebiyo dhaarta labada Beelood iyo qodob kamid ah qodobada go,aankan waxa reerka ay ku cadaataa mutaysanayaa xadhig loo maray sifaha sharciga iyo bixinta ganaax lacageed oo ah $20,000 oo lagu qiimaynayo hadba dhumucda dhacdadu inta ay leegtahay.
B- Go,aankani waxuu si rasmiya dhaqan gal u yahay marka la soo saaro nuqul ay ku saxeexan yihiin wasiirrada xukuumadda ee uu Madaxwaynaha JSL u soo igmaday arinta khilaafka Duud Caraale iyo deegaanka Ceel-Afwayn.
T- Laga bilaabo taariikhda go’aankani soo baxo waa dhaqan gal qodobadiisu xogta nuxur ee u xambaarsan yahay iyo guud ahaan fulinta awaamiirta uu tilmaamayo.
6 SAXEEXA GO’AANKAN
Yaasiin Maxamuud xiir (Faratoon) Wasiirka Arrimaha gudaha ————————
Cusmaan Cabdullahi Saxardiid ( Cadaani) Wasiirka Warfaafinta ———————
Cali Saciid Raygal Wasiirka Dibu-dejinta iyo Dibu dhiska ———————
Farxaan Aadan Haybe Wasiirka Duulista Hawada iyo Gadiidka Cirka ——————–6. Cabdirashiid Maxamuud Cali W. Dawlaha Xanaanada xoolaha ——————–
Maxamuud Warsame Jaamac Wasiir Xigeenka Gaashaandhiga